Akụkọ Bible: Jona na Azụ̀ Ukwu Ahụ - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
LEGODỊ nwoke a nọ n’ime mmiri. Ọ nọ ná nnukwu nsogbu, ka ọ̀ bụ na ọ nọghị? Azụ̀ ahụ na-achọ ilo ya! Ị̀ ma onye nwoke a bụ? Aha ya bụ Jona. Ka anyị hụ otú o si banye ná nnukwu nsogbu dị otú a.
Jona bụ onye amụma Jehova. N’oge na-adịghị anya ka Ilaịsha nwụsịrị, Jehova gwara Jona, sị: ‘Jee n’obodo ukwu bụ́ Ninive. Ajọ omume nke ndị bi na ya na-eme hiri nne nke ukwuu, achọkwara m ka ị gwa ha okwu banyere ya.’
‘Ma Jona achọghị ije. Ya mere, ọ banyere n’ụgbọ nke na-eje ebe ọzọ na-abụghị Ninive. O wutere Jehova na Jona na-agbara ọrụ o nyere ya ọsọ. N’ihi ya, Jehova mere ka oké ifufe malite ife. O fesiri nnọọ ike nke na ụgbọ ahụ chọwara ikpu. Ụjọ tụrụ ndị na-anya ụgbọ mmiri ahụ nke ukwuu, ha wee kpọkuo chi ha ka o nyere ha aka.
N’ikpeazụ, Jona gwara ha, sị: ‘Ana m efe Jehova Chineke, onye kere eluigwe na ala. Ọ bụ ọrụ Jehova nyere m ka m na-agbara ọsọ.’ Ya mere, ndị ahụ na-anya ụgbọ mmiri ahụ jụrụ ya, sị: ‘Gịnị ka anyị ga-eme gị ka oké ifufe nke a kwụsị?’
Jona sịrị ha: ‘Tụbanụ m n’ime oké osimiri a, osimiri a ga-adajụkwa.’ Ndị na-anya ụgbọ mmiri ahụ achọghị ime nke a, ma mgbe oké ifufe ahụ bịara ka njọ, ha tụbara Jona n’oké osimiri ahụ. Ozugbo ahụ, oké ifufe ahụ kwụsịrị, oké osimiri ahụ wee dajụọ.
Ka Jona na-emikpu n’ime mmiri, azụ̀ ukwu loro ya. Ma ọ nwụghị. Ọ nọrọ n’ime afọ azụ̀ ahụ ụbọchị atọ—ehihie na abalị. O wutere Jona nke ukwuu na ya egeghị Jehova ntị wee jee Ninive. N’ihi ya, ị̀ ma ihe o mere?
Jona kpekuru Jehova ekpere ka o nyere ya aka. Jehova wee mee ka azụ̀ ahụ gbọpụta Jona n’ala akọrọ. E mesịa, Jona jere Ninive. Nke a ọ́ dịghị akụziri anyị na ọ dị ezigbo mkpa ka anyị na-eme ihe ọ bụla Jehova kwuru?
Akwụkwọ Bible bụ́ Jona.
Ònye bụ Jona, gịnịkwa ka Jehova gwara ya ka o mee?
Ebe ọ bụ na Jona achọghị ịga ebe Jehova gwara ya ka ọ gaa, gịnị ka o mere?
Gịnị ka Jona gwara ndị ahụ na-anya ụgbọ mmiri ka ha mee ma ọ bụrụ na ha chọrọ ka oké ifufe ahụ kwụsị?
Dị ka ị na-ahụ na foto a, gịnị mere mgbe Jona na-emikpu n’ime mmiri?
Ogologo oge hà aṅaa ka Jona nọrọ n’afọ azụ̀ ukwu ahụ, gịnịkwa ka o mere n’ebe ahụ?
Olee ebe Jona gara mgbe azụ̀ ukwu ahụ gbọpụtasịrị ya, gịnịkwa ka nke a na-akụziri anyị?
Gụọ Jona 1:1-17.
Dị ka ihe àmà gosiri, olee otú Jona si lee ọrụ e nyere ya ịga kwusaara ndị Ninive ozi ọma anya? (Jona 1:2, 3; Ilu 3:7; Ekli. 8:12)
Gụọ Jona 2:1, 2, 10.
Olee otú ihe mere Jona si eme ka anyị nwee obi ike na Jehova ga-aza ekpere anyị? (Ọma 22:24; 34:6; 1 Jọn 5:14)
Gụọ Jona 3:1-10.
Agbamume dị aṅaa ka anyị na-enweta site n’eziokwu ahụ bụ́ na Jehova gara n’ihu jiri Jona rụọ ọrụ n’agbanyeghị na Jona ekwebughị arụ ọrụ e nyere ya? (Ọma 103:14; 1 Pita 5:10)
Gịnị ka ihe ndị Ninive mere n’ihi ihe Jona gwara ha na-akụziri anyị banyere ibu ụzọ kwubie otú ndị nọ n’ókèala anyị ga-esi meghachi omume ọbụna tupu anyị agakwuru ha? (Jona 3:6-9; Ekli. 11:6; Ọrụ 13:48)
Kaadị Akụkọ Jona
Olee àgwà ndị Jehova nwere, bụ́ ndị akụkọ Jona ga-akụziri anyị?